Shina Model No: Shinoa Manufacture Automatic Control SPJ Series vy shredder milina orinasa sy ny mpamatsy | Miray Top
Model No: Shinoa Manufacture Automatic Control SPJ Series milina shredder vy
Ny milina shredder metaly dia afaka mitantana ireo karazana vokatra metaly rehetra, toy ny vy, kapoaka, siny hosodoko ary vokatra metaly hafa, ny orinasanay dia afaka mitsapa ny akora manta ho an'ny mpanjifa.
Mihoatra ny 25+ taona ny famokarana traikefa, manome namboarina mihoatra noho ny 3000+ mametraka rafitra fanodinana vy.
Metal shredder milina dia multi-functional, zavatra maro milina, ny fampiasana ny manara-penitra Modular famolavolana, ny ampahany interchangeability dia tsara, fanampiny antsy mba handray ho faty forging voadio avy. Ny tena tanjona amin'ny milina shredder vy dia ny hanety sy ny extruding ny fitaovana vy lehibe sy ny savaivony lehibe amponga vy akora izay tsy mety amin'ny fitaterana, ary shred ho any amin'ny taratasy ilaina fitaovana mba hampitombo ny fanangonan-karena hakitroky ho mora ny fitaterana sy ny fanodinana. Ny bika aman'endriny, ny rafitra kanto, mazava sy mirindra. Ny endriky ny milina shredder vy lehibe dia tsy vitan'ny manatsara ny fahaiza-mamokatra sy ny fahombiazan'ny fanorotoroana, fa manitatra ny sehatry ny fampiharana.
Ny milina shredder metaly dia ampiasaina indrindra amin'ny fanorotoroana vy, hampitombo ny hakitroky ny ankamaroany mba hanamora ny fitaterana, ny fanodinana. Metal shredder milina dia be mpampiasa amin'ny shredding loko siny, Diesel siny, manify vy taratasy, fiara akorandriaka, vy fanerena sakana, ravin-taratasy sy ny sisa vy fitaovana. Ny lelan'ny milina shredder metaly dia vita amin'ny vy firaka mahery vaika, miaraka amin'ny fanoherana mahery vaika sy hery avo ...
●Mafy mihetsika antsy, avo famotehana fahombiazana, fitaovana dia vita amin'ny firaka fanariana vy, mafy sy ela fanompoana ny fiainana.
●Frame plate hatevin'ny, mahatohitra Torque avo, tena mahery.
●Microcomputer (PLC) fanaraha-maso mandeha ho azy, amboary ny fanombohana, atsaharo, mamadika ary be loatra ny fiasan'ny fanaraha-maso mivadika.
●Ny milina shredder metaly dia manana ny toetran'ny hafainganam-pandeha ambany, ny torque lehibe, ny tabataba ambany, ny vovoka dia mety hahatratra ny fenitra fiarovana ny tontolo iainana.
●Mora amboarina, mora ny fikojakojana, ara-toekarena ary mateza.
●Ny hatevin'ny fitaovana sy ny isan'ny holatra antsy azo ovaina araka ny fitaovana isan-karazany
Ny fitsipiky ny fiasan'ny milina shredder metaly:
Fitaovana amin'ny alalan'ny rafitra famahanana ho ao amin'ny shredding milina ao anatin'ny boaty, vy shredder milina boaty mitondra ny shredding lelan-tsabatra, fitaovana taorian'ny shredding lelan-tsabatra nandrovitra, extrusion, hanety sy ny hetsika feno, shredded ho tapa-fitaovana kely mba hihaona ny fepetra, avy amin'ny ambany ampahany amin'ny boaty. Ny firongatry ny vy shredder milina tsy vitan'ny hoe mamaha ny faritra midadasika ny fitaovana stacking amin'ny alalan'ny fanodinana vy shredder milina dia mora ihany koa ny fitaterana sy ny fanodinana. Ao amin'ny dingana manontolo, ny tena zava-dehibe dia ny cutter loha sy ny maotera, vy shredder milina hamiravira fitaovana vy, cutter loha hamafin'ny, mitafy fanoherana dia avo indrindra, raha tsy niakatra ho any amin'ny fepetra dia hitarika ho amin'ny fahasimban'ny vy shredder milina.
Ny milina shredder metaly dia manana fanaraha-maso mandeha ho azy, mety kokoa amin'ny fandidiana, fikojakojana tsotra.
1.Metal Shredder milina lelany
Azontsika atao ny manamboatra ny lelan'ny milina fanodinana metaly ho anao momba ny akora vita amin'ity milina shredder ity.
3. milina rehetra-in-iray
Ny milina shredder metaly kely iray dia manana endrika manokana, mandrakotra faritra kely, manana fiarovana sy fiarovana.
MODELY Savaivony lelany (mm) Haben'ny efitra (mm) fahafahana (kg/h) Hery (kw) Haben'ny milina (mm) Lanja (kg)
Ny milina shredder metaly SPJ Series dia manome ampahany amin'ny milina marika malaza, niara-niasa tamin'ny mpamatsy marika malaza eran-tany izahay, toa an'i SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI sy ny sisa nandritra ny 10 taona mahery.
Hampiasa fonosana sarimihetsika voafono na fonosana hazo izahay mba hiarovana ny milina fanodikodinan'ny vy SPJ Series, hanao fiarovana tsara ho an'ny milina fanodinana metaly SPJ Series izahay alohan'ny hampidirana fitoeran-javatra.
Jereo ny milina shredder vy efa miasa!
teo aloha: Modely No: CBJ Series hydraulic scrap bale breaker machine
Manaraka: Modely No: Fanaraha-maso Manufacture Manual Q43 Series Hydraulic Scrap Metal Alligator Shear Machine
milina shredder metaly
Baler baoritra vita an-trano, Aluminum Foil Baler Machine, Fitaovana Pop-Top Can Baler, Y81 Hydraulic Baler, Scrap Metal Compactor, Leaf Compactor sy Baler,